ဗီတာမင် ဘီ ၇ | Moe Naymin
ဗီတာမင် ဘီ ၇
Submitted by Moe Nay Min
ဗီတာမင် ဘီ ၇ ကို biotin ဟုလည်း ခေါ်ပါသည်။ ၄င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ အစာခြေဖျက်ခြင်းနှင့် အင်ဇိုင်းများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် အရေးကြီးသော ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါသည်။ biotin သည် ဆံကေသာ နှင့် ခြေသည်းလက်သည်းတို့၏ ကျန်းမာသန်စွမ်းခြင်းကို အဓိက အားပေးပါသည်။ ဗီတာမင် H ဟုလည်း ဆံကေသာကို ကိုယ်စားပြု၍ ခေါ်ကြပါသည်။ Dr. Sherry Ross ၏ ပြောကြားချက်အရ biotin သည် အရေပြား၊ အာရုံကြောနှင့် အစာခြေလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်သော ဆဲလ်များအတွက် အဓိက အထောက်အကူပြုပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ရှိ စွမ်းအင်ရရန် အဓိက ဖြစ်သော fatty acid နှင့် Glucose ထုတ်လုပ်ရာတွင်လည်း လိုအပ်သော အရာဖြစ်ပါသည်။
ှဗီတာမင် ဘီ ၇ ကို အစားအစာများတွင် အနည်းငယ်မျှသာ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အသည်း၊ ဂေါ်ဖီ၊ ဆဲလ်မွန်ငါး၊ မုန်လာဥနီ၊ ပဲ၊ တစေး၊ ကောက်ပဲသီးနှံ၊ ဂျုံနှင့်ပြုလုပ်ထားသော ပေါင်မုန့်၊ ကြက်ဥ၊ နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အစေ့အဆံအသီးများတွင် အနည်းငယ် တွေ့ရှိရပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ကဆီဓါတ်၊ အဆီများနှင့် အသားဓါတ်များ အစာခြေဖျက်ရတွင် biotin ကို အသုံးပြုပါသည်။ လူအများစုက ဘိုင်အိုတင်ကို သူတို့၏အရေပြား၊ ဆံကေသာနှင့် လက်သည်းခြေသည်း ကျန်းမာရေးအတွက် အဓိက မှီဝဲသုံးစွဲကြပါသည်။ လေ့လာမှုအများအပြားအရ ဘိုင်အိုတင်သည် ထိုကဏ္ဍများတွင် အထူးကောင်းမွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဘိုင်အိုတင်ဓါတ် ချို့တဲ့လျှင် ဆံပင်နှင့် လက်သည်းခြေသည်းများ ကျွတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျိုးလွယ်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ Alpha Therapy Center ၏ လေ့လာချက်အရ ဗီတာမင် ဘီ ၇ သည် chromium picolinate နှင့်အတူ တွဲ၍ မှီဝဲပါက ဆီးချိုရောဂါရှင်များတွင် အချိုဓါတ် စားသုံးခြေဖျက်မှုများကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပြီး ဆီးချိုရောဂါရှင်များ အဖြစ်များသော ခြေလက်ထုံကျင်ခြင်းများကို သက်သာစေပါသည်။
ဆံကေသာ ကျွတ်ဆက်ခြင်း၊ အလွယ်တကူဆံပင်ကျွတ်လွယ်၍ နှခွဖြစ်ခြင်း၊ မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်းနား အနီကွက်ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်း၊ အာရုံခြောက်ခြား၍ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ ခြေလက်ထုံကျင်ကိုက်ခဲခြင်း စသည်များတွင် အသုံးပြုပါသည်။ လေ့လာချက်အချို့အရ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ဘိုင်အိုတင်ဓါတ်ကို လျော့နည်းစေပါသည်။
တစ်နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအတွက်7mcg ၊ တစ်နှစ်မှ သုံးနှစ် ကလေးအတွက် 8 mcg ၊ လေးနှစ်မှ ရှစ်နှစ်ကလေးအတွက် 12 mcg ၊ ကိုးနှစ်မှ ဆယ့်သုံးနှစ်အတွက် 20 mcg၊ ဆယ်ကျော်သက်များအတွက် 25 mcg၊ အသက်ဆယ်ရှစ်နှစ်နှင့် အထက် 30 mcg နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များအတွက် 35 mcg အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Mayo Clinic ကမူ အရွယ်ရောက်ပြီးလူတစ်ဦးတွင် 30 မှ 100 mcg အတွင်း နေ့စဉ် မှီဝဲနိုင်သည်ဟု ပြောပါသည်။
Vitamin B7, also called biotin, isavital part ofahealthy metabolism and creating important enzymes. Biotin is often used to strengthen hair and nails, and is also called Vitamin H (for hair).
"Many systems benefit from biotin including the skin, nerves, digestive tract, metabolism and cells," said Dr. Sherry Ross, OB/GYN and Women’s Health Expert at Providence Saint John’s Health Center in Santa Monica, California. "Biotin is needed for the formation of fatty acids and glucose, which are used as energy in our body."
Sources of B7
Biotin is found in small amounts in food. "Foods that contain biotin are liver, cauliflower, salmon, carrots, bananas, soy flour, yeast, wheat germ, whole-grain cereals, whole wheat bread, eggs, dairy products, nuts, Swiss chard and chicken," said Ross.
Biotin is vital to many body functions. According to the University of Maryland Medical Center, vitamin B7 is used by the body to metabolize carbohydrates, fats and amino acids. It is also vital for the normal growth of fetuses. Many people take biotin supplements to increase the health of their skin, hair and nails. While more research is needed, it seems that B7 may be helpful in these areas. A double-blind study by the Ablon Skin Institute Research Center and the University of California found that taking biotin created significant hair growth in women with temporary hair thinning. The U.S. National Library of Medicine also notes that biotin can be helpful in the treatment of skin rashes in infants known as seborrheic dermatitis or cradle cap. There is no research to prove this claim, according to the Penn State Hershey Medical Center.
"Biotin is important for hair, skin and nails," said Lauren Graf, clinical dietitian for Montefiore-Einstein Cardiac Wellness Program. "Low levels of biotin can lead to brittle nails and thinning hair. There is some evidence that biotin supplements can help prevent hair thinning, especially if you are deficient. Takingabiotin supplement is not likely to be harmful and may improve hair quality."
B7 may also be helpful in the treatment of diabetes. A study by Alpha Therapy Center found thatatreatment that combines chromium picolinate and B7 improves glucose metabolism in patients with type2diabetes. High doses of biotin were also found helpful in the treatment of peripheral neuropathy,asymptom of diabetes.
Treating and preventing biotin deficiency. Symptoms of deficiency include thinning of the hair (often with loss of hair color), and red scaly rash around the eyes, nose, and mouth. Other symptoms include depression, listlessness, hallucinations, and tingling in the arms and legs. There is some evidence that cigarette smoking may cause mild biotin deficiency.
7 mcg for infants 0-12 months, 8 mcg for children 1-3 years, 12 mcg for children 4-8 years, 20 mcg for children 9-13 years, 25 mcg for adolescents 14-18 years, 30 mcg for adults over 18 years and pregnant women, and 35 mcg for breast-feeding women.
The Mayo Clinic recommends 30 to 100 mcg per day for adults. There are no recorded side effects for biotin in amounts up to 10 milligramsaday, according to the Mayo Clinic. There is also no known dosage of biotin that could cause toxicity in the body, resulting in overdose. Since all B vitamins are water soluble, the body does not store excess amounts and flushes it away.-
မဟာစည် ရဟန်းဘ၀ ခဏတာ အတွေ့အကြုံ
Post date: 15 May2017
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ မှီတင်း၍ နေထိုင်ကြကုန်သော လူပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည် နှ...
ဗီတာမင် ဘီ ၁၃
ဗီတာမင် ဘီ ၁၃ တွင် orotic acid နှင့် pyrimidine carborylic acid တို့ ပါဝင်ြ...
Please use this email address to contact me by email.
Powered by MM Cities ©2015 All rights reserved.